Ku saabsan Wanyu | Shanghai Wanyu Qalabka Qalabka Caafimaadka Co., Ltd.
Shanghai Wanyu Qalabka Qalabka Caafimaadka Co., Ltd.
Dooro hal shay intaad nooshahay.
Diirad saar samaynta alaabooyinka qiimo aad u muhiim ah.
Jacaylka inaad alaabooyin samayso waxay leeyihiin naf.
Bishii Juun 2003, shirkaddu waxay maalgashatay abuuritaanka warshad ku takhasustay horumarinta iyo soo saarista qalabka caafimaadka ee qolalka hawlgalka. Kadib aasaasida warshada, tiro aad u tiro badan oo hibo cilmiyeed iyo farsamo iyo shaqaale si fiican u tababaran ayaa laqanciyay lana ururiyey si loo dhiso loona hagaajiyo maamulka shirkadaha. Waqtigan xaadirka ah, dhammaan alaabooyinkeennu waxay dhaafeen shahaadada CE iyo ISO.
Waqtigan xaadirka ah, shirkadeena waxay soo saartay miisas badan oo shaqeynaya, taxane farabadan oo ah laambado aan shaqeyneynin, xargaha caafimaadka, buundooyinka ganaaxa ICU iyo alaabada kale ee qalabka caafimaadka. Waxyaabahani waxay ku jiraan booska hogaaminta ee Shiinaha waana la soo dhoofsan karaa si loo buuxiyo shuruudaha kala duwan ee isbitaalada kala duwan. Waxaa laga iibiyaa adduunka oo dhan waxaana si ballaaran u amaanay dadka isticmaala.
Kaliya ma lihin in ka badan toban injineerro R&D ah oo mas'uul ka ah sii socoshada R&D iyo hal-abuurka alaabooyin kala duwan, laakiin sidoo kale waxaan ilaalinaa xiriiro iskaashi muddada-dheer ah oo lala yeesho jaamacado badan.
Waxaan xalka ka gudubnay shahaado xirfad qaran oo si wanaagsan loogu soo dhoweeyay warshadeenna muhiimka ah. Kooxdayada takhasuska leh ee injineernimada badanaa waxay diyaar u yihiin inay kuugu adeegaan latashi iyo jawaab celin.